Hammer Mills na-eweta na Factory - China Hammer Mills Manufacturers
Ihe nkọwapụta Ngwaọrụ ntụ ọka nwere ike iji igwe eletriki ma ọ bụ mmanụ dizel na-ebugharị ya. Ọ nwere ike igweri akwụkwọ nri dị iche iche, osikapa, ọka, na ọka ndị ọzọ. Husks, ahịhịa, ogbugbo, epupụta, ọka wit, osikapa osikapa, ọka ọka, ahịhịa, ọka, akpọnwụ akpọnwụ, nri azụ, ahịhịa mmiri, akwụkwọ nri akpọnwụ, hawthorn, ngwa nri, ụbọchị, vinasse, achịcha, ihe fọdụrụ na poteto, tii, soybean, Cotton , mgbọrọgwụ osisi, osisi, epupụta, okooko osisi, mkpụrụ osisi, ọtụtụ narị ụdị ero dị ka oriri na ihe ndị ọzọ siri ike nhazi.
Ngwaahịa Ihe igwe igwe igwe na-adabara ọka ọka, ọka wit, ọka bean, ọka owu na ihe ọkụkụ ndị ọzọ dị iche iche. O nwere ike igwakorita ihe ahu n’ime obere. Igwe silage na-eme igwe nwere ike ime ka nri anumanu nke anumanu di nma, onu nri ya na nri ya. N'otu oge ahụ, ọ nwekwara ike igweri ihe ọkụkụ ọ bụla, ọka, ọka wit, soybean, wee ghee n'ime ntụ ọka, nke dị ọcha ma dị ọcha, enwere ike iri ya. The igwe bụ a sọrọ nzube igwe na ezi uche p ...